Shirkadda Golis oo ka qayb qaadatay xafladihii qalin-jabinta jaamacadaha ku yaal Puntland | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo ka qayb qaadatay xafladihii qalin-jabinta jaamacadaha ku yaal Puntland
Shirkadda Golis Telecom Somalia ayaa sidii caadada ahayd qaadatay doorkeeda ku aadan garab istaaga goobaha wax barashada iyo dhalinta ku jirta halganka waxbarasho ee ku dhaqan deegaanada Puntland.
Xafladihii qalinjabinta sanad waxbarashadeedka 2016-2017 ee ay jaamacadaha ku yaal Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso u qabteen ardayda dhamaysatay waxbrashada degree-ga 1aad ayay golis ka qaadatay kaalin muuqata qabsoomidooda.
Waxa kamid ah xafladii qalin jabinta jaamacadda Bariga Afrika oo ay goob jog ahaayeen masuuliyiinta sare ee shirkadda Golis, halkaas oo maamulka jaamacadda Bariga Afrika iyo masuuliyiinta ka qayb gashay xaflada-ba ay ku amaaneen sida wanaagsan ee ay uga qayb qaadato shirkaddu munaasabadaha farxadda leh ee loo qabto bahda waxbarashada guud ahaan Puntland.
Dhinaca kale munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday dhamaysatay qaybaha kala duwan ee waxbrashada ay bixiso jaamacadda Boosaaso ayaa ka dhacday magaalada Boosaaso taas oo ay shirkaddu ku bixisay abaalmarino qaali ah oo la gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha ugu sareeya ka galay jaamacadda Boosaaso.
Waxaan mar iyo labo lagu soo karin waxqabadka iyo garab istaagga shirkadda Golis ee bahda waxbarashada, waxana sidoo kale ka go’an shirkadda in mar walba ay sidaas iyo si ka wanaagsan u taageerto bahda waxbarashada.